पार्टी नेतृत्वले वेलैमा बुद्धि नपु¥यायका कारण एमाले दाङले ठूलो क्षति बेहोर्दैछ ः एमाले युवा नेता ओलि | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
पार्टी नेतृत्वले वेलैमा बुद्धि नपु¥यायका कारण एमाले दाङले ठूलो क्षति बेहोर्दैछ ः एमाले युवा नेता ओलि
| 1593 Views | Published Date : 30th June 2016 |
विवाद बढ्दै गए केन्द्रवाट हस्तक्षेप गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने
जिल्ला सचिवाय सदस्य एवं
क्षेत्रनम्वर ५ का ईञ्चार्ज
नेकपा एमाले दाङ
आजभोलि दिन कसरी बितिरहेका छन् ?
भरखरै गृहजिल्ला दाङको १ महिने कार्यक्रम सिद्धाएर काठमाडौँ आइपुगेको छु । काठमाडौँ रहँदा वजेटमा समेटिएका योजनाहरुलाई अगाडि बढाउने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगेर छलफल गर्ने योजना बनाएको छु । सरकारको यस वर्षको वजेटमा दाङमा धेरै विकासका योजनाहरु परेका छन्, म विशेषतः क्षेत्रनम्वर ५ को भुगोलको राजनीति गर्ने भएकाले मैले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रनम्वर ५ मा के–कस्ता विकासका योजनाहरु परेका छन् ? भनेर बुझ्नुका साथै समयमै काम सुचारु गराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने मनसायले म काठमाडौँ आएको हुँ र हाल त्यही काममा व्यस्त छु ।
वजेटमा समेटिएका योजनाहरुलाई अगाडि बढाउन काठमाडौ“ आएको भन्नुभयो, क्षेत्रनम्वर ५ भित्र के–के योजना परेका छन् त ?
यसवर्षको वजेटमा सडक योजनाहरु धेरै परेका छन् । जसमा दाङ–सुर्खेत सडक बहुवर्षिय योजना त छँदैछ । यसका साथै पवननगर हेल्थपोष्ट, देविस्थान हुँदै स्विकोट मन्दिर जाने बाटो, बैवाङ पोटली हुँदै मखनटाकुरी जाने बाटो, सुकौरा–चरकमटिया सडक, सुकदेवा, बबई, बालापुर पवननगर हेल्थपोष्ट मनकामना देवि मन्दिर बयालेकोट हुँदै फालावाङसम्म पुग्ने बाटो, पुरन्धारा गाविस हापुरे सितलगौरा पानी हाल्ना एकलेचौर सडक र वंगलापुर फुर्केसल्ली मलै जाने सडक बजेटमा परेका छन् । यसका साथै अन्य योजनाहरु पनि परेका छन् ।
क्षेत्रनम्वर ५ का सांसद दीपक गिरीले हालै दाङमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आफ्नै कारणले क्षेत्रनम्वर ५ भित्र तपाईले भनेकै योजना पारेको भन्नुभएको थियो । तपाईले आफूले पारेको दावी गर्नुहुन्छ । कुनलाई सत्य मान्ने ?
तपार्इँले सोधेको प्रश्न मलाई स्थानीयहरुबाट नसोधिएको होइन । हामी कहाँ काम भन्दा पनि कुरा धेरै गर्ने प्रवृत्ती हिजोदेखि नै देखिदै आएको हो । आज पनि त्यही भइरहेको छ । क्षेत्रनम्वर ५ को विकासका लागि हिजोदेखि नै व्यवस्थित विकासको पहल भएको थिएन । दाङ–सुर्खेत सडक खण्डमा छुट्याइने कनिके बजेटमै चित्त बुझाउँदै आएको क्षेत्रनम्वर ५ को अवस्था हिजो जस्तो छैन । हरेक निर्वाचनमा आगन्तुक व्यक्तिहरु उम्मेदवार बन्ने निर्वाचन जितेर गएपछि एकपटक पनि निर्वाचन क्षेत्र फर्केर नआउने जुन स्थिति हिजोका दिनमा थियो, पछिल्लो निर्वाचनबाट त्यो तोडिएको छ । आन्तरिक विवादका कारण मैले निर्वाचनमा पराजय भोगे पनि म कहिल्यै आफ्नो क्षेत्रका जनताहरुदेखि टाढा गएको छैन । क्षेत्रको विकासका लागि लागिपरिरहेकै छु । यसवर्ष झन् मलाई सजिलै भयो । वर्तमान अर्थमन्त्रीसँग राम्रो सम्वन्ध भएका कारण पनि मैले भनेका योजना वजेटमा समेट्न सफल भएको छु । वजेटमा समेटिएका योजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि मैले कुनै कसुर बाँकी राख्ने छैन । म यहाँहरुकै पत्रिकामार्फत् क्षेत्रनम्वर ५ बासीहरुलाई चनाखो रहन अनुरोध गर्न चाहन्छु । समयमै काम नभएर वजेट फ्रिज भइरहेको सन्दर्भमा यो रोक्न तपाईहरुकै सक्रियताले काम गर्ने हो । मैले निर्वाचनको समयमा उठाएका धेरै योजनाहरु यस वर्षको वजेटमा पनि पार्न सकेको छैन । निर्वाचनमा पराजय बेहोरे पनि जनता सामु मैले गरेका वाचा पुरा गर्नतर्फ आगामी समयमा लागिरहने छु ।
क्षेत्रनम्वर ५ ले यसवर्ष पनि कनिके वजेटमै चित्त बुझाउनुपर्ने भयो होइन ?
यहाँले भनेको कुरा केही हदसम्म साँचो हो, पूर्णरुपमा त्यो होइन । विकास आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्ने कुरा हो, त्यो भइरहन्छ पनि । क्षेत्रनम्वर ५ यस्तो अवस्थामा छ जहाँ अझै बाटाघाटा राम्रोसँग बन्न सकेका छैनन् । क्षेत्रनम्वर ५ का धेरै स्थानसम्म गतिलो मोटर बाटो बन्न सकिररहेको छैन, यस्तो अवस्थामा यातायातलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हो । तपार्इँले यसवर्षको वजेट हेर्नुभयो स्पष्ट हुनुहुनेछ–वजेटभित्र सडक योजनाहरु धेरै परेका छन् ।
अब प्रसंग बदलौं, पार्टीभित्र विवाद चुलिदै गर्दा पार्टीका युवाहरु किन विवाद समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिनुहु“दैन ?
तपाईँले अत्यन्तै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो । पार्टी विभक्त हुँदा हामी युवाहरु एक ठाउँमा आएर पार्टी मिलाउनतर्फ लाग्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । मैले आफ्नो स्थानबाट यस विषयमा पहल पनि गरेको हो । जिल्लामा हुकुमबहादुर बस्नेत र जोगबहादुर रानाका बीचमा विवाद उत्पन्न भइसकेपछि मैले जिल्ला ईञ्चार्ज मेटमणि चौधरी, निवर्तमान अध्यक्ष नरुलाल चौधरी, पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण आचार्यसँग बसेर कुरा गरेको हो । भेटमा पूर्व अध्यक्षहरु गम्भीर भए पनि मेटमणि चौधरी ज्यूमा त्यो गम्भिरता देखिएन । उहाँ सम्भावना बोकेका नेताहरुलाई विधान मिचेर कारबाही गर्दै हिड्नुभएको छ । जिल्लाका कसैलाई पनि कारबाही गर्ने अधिकार मेटमणि चौधरीलाई छैन । उहाँले केन्द्रलाई सिफारिस गर्ने हो । त्यसो नभएर एकलौटी रुपमा उहाँ अगाडि बढ्दा दाङमा समस्या देखिएको हो । अर्को कुरा पार्टी मेटमणि चौधरीको मात्रै होइन । उहाँको चाकडी नगर्नेहरु सबैलाई एक–एक गरी कारबाही गरेर उहाँले के गर्न खोज्नुभएको ? उहाँले विधान भन्दा बाहिर काम गर्न मिल्छ या मिल्दैन ? यी जवाफ तपाईँहरुले उहाँलाई सोध्नुपर्छ ।
तपाईले यसो भनेपनि विवाद नेतृत्वमा नभएर तपाई“ युवाहरुमै देखियो । पदको पछि लागेर कहिलेसम्म नेताको चाकडी गर्दै पार्टी बिगार्नुहुन्छ ?
मैले माथि नै भनिसकेँ । दाङभित्र हाम्रा केही यस्ता युवा नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु पदका लागि जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ । नेताहरुले आएर तलाईँ अध्यक्ष बनाउँछु, सचिव बनाउँछु भन्देकै भरमा उहाँहरु उफ्रिरहनुभएको छ । उहाँहरु नै ठूल्ठूलो स्वरमा कराइरहनुभएको छ–पार्टी बिग्रीयो, बनाउने अभियानमा एक होऔं । पार्टीभित्र सम्भावना बोकेका नेताहरुलाई सिध्याएर, नेताहरुको चाकडी गरेर कहिलेसम्म पार्टी बन्छ ? उहाँहरु कहिलेसम्म नेता बन्नुहुन्छ ? यो सब समयले देखाउने कुरा हो । एमालेमा लागेकैले धेरै युवाहरुले आफ्नो जिन्दगी बिगार्नुभएको छ, पार्टी छिन्नभिन्न हुँदा आज ती सबै युवाहरु चिन्तित हुनुहुन्छ । यो कुरा नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ?
हुकुमबहादुर बस्नेत र जोगबहादुर रानाको टीमको पछाडि लागेर कहिलेसम्म छिन्नभिन्न हुनुहुन्छ ?
तपाईँको प्रश्नले मलाई अत्यन्तै गम्भिर बनायो । बाहिर सतहमा तपाईले भनेको जस्तो देखिए पनि यथार्थमा यो होइन । दाङ पार्टीमा व्यक्ति नभएर प्रवृत्तीको लडाई हो । हिजो यही प्रवृत्तीकै कारण पार्टीका तत्कालिन सचिव युवराज ज्ञवाली र शंकर पोख्रेलले निर्वाचनमा हार बेहोर्नुभयो । दाङ पार्टीमा सुदख् अवस्था देखिदै गर्दा पटक–पटक एउटै प्रवृत्ती हाबी हुन्छ, त्यसकै कारण हिजो र आज एमाले यो अवस्थामा छ । लक्ष्मण आचार्यले यही प्रवृत्तीकै कारण १८ महिना काम गर्न नसकेर ६ महिना पूर्व नै अधिवेशन गर्न बाध्य हुनुभएको थियो र नरुलाल चौधरीले यही प्रवृत्तीकै कारण १२ महिना काम गर्न नपाएको दाङका एमालेका पार्टी सदस्यहरुलाई छर्लङ्गै छ । केही समय सुस्ताएको हिजोको प्रवृत्ती आज फेरि एक भएको छ । उनीहरुले पार्टी निर्माणको यात्रामा दौडिरहेका युवा नेताहरुलाई कसैलाई अध्यक्ष त कसैलाई सचिव अनि कसैलाई उपाध्यक्ष र उप–सचिवको कार्ड फ्याँकेका छन् अनि युवाहरु त्यही सपनामा दौडिनुभएको छ र समस्या थपिएको हो । पार्टीभित्र निरङ्कुशता बढ्दै जाँदा त्यसलाई निस्तेज पार्न हामी लागिपरेका छौं । मलाई विश्वास छ यो अभियानमा लागेका हामी युवाहरु थाक्नेछैनौं ।
हुकुम र जोगबहादुरले बजाएको मादलमा कहिलेसम्म नाच्नुहुन्छ ?
मैले अघि नै भनिसकेँ यो पार्टीभित्रका व्यक्ति नभएर प्रवृत्तीसँगको लडाई हो । दाङको पार्टीको विवाद अब जिल्ला ईञ्चार्जको हातभन्दा माथि पुगिसकेको छ । केन्द्रीय कमिटीले दाङको पार्टीको विवादका बारेमा ठोस निर्णय गर्दासम्म हामीले चाहेर मात्रै केही हुने अवस्था छैन । हिजो जुन बेला हामीले चाहेका थियौं त्यो बेला साथीहरुले मान्नुभएन, अब स्थिति बदलिएपछि जिल्ला तहबाट कुनै समस्याको समाधान हुँदैन ।
पार्टी बिग्रीदा यहाँहरुलाई कत्ति पनि चिन्ता लाग्दैन ?
चित्त नदुखेको पनि होइन । चिन्ता नलागेको पनि होइन । मैले पटक–पटक भनिरहेको छु–निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीलाई हराउन कांग्रेसको उम्मेदवारलाई भोट हाल भन्दै पार्टी कार्यकर्ताको घरदैलो चाहर्नेहरु नै हाम्रा नेता छन् । उनीहरुबाट हामीले यो भन्दा कस्तो पार्टीको आश गर्ने । अर्को कुरा दुई ओटा निर्वाचनमा जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा हार बेहोरिसकेका हामी एमालेगणका लागि गुमाउनलाई त्यो भन्दा ठूलो कुरा के नै छ र ? जुन दिनसम्म दाङमा पार्टीलाई भन्दा आफूलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रवृत्ती हावी भइरहन्छ त्यो दिनसम्म यस्तै हो ।
तपाई“हरु असार २५ गते जिल्ला प्रतिनिधि परिषद्को भेला गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसको आधिकारिकता के हो ?
पार्टीहरु विधिमा चल्ने हो, हामीले त्यही विधिमै टेकेर परिषद्को भेला गर्दैछौं । जिल्ला अध्यक्ष मथिल्लो निकायमा उम्मेदवारी दिइसकेपछि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुभएका जोगबहादुर रानाले १ वर्षभित्र परिषद् गरिसक्नुपथ्र्यो त्यो गर्नुभएन । हामीले माघ २२ गते परिषद्को भेला तोकेका थियौं । परिषद्को अन्तिम तयारी भइसकेको समयमा जिल्लाको विवाद मिलाउन केन्द्रबाट आएको सर्कुलरबाट हामी पछाडि हटेका थियौं । जिल्ला कार्यवाहक अध्यक्षले केन्द्रको सर्कुलरको विरुद्धका गतिविधि सञ्चालन गर्दै गएपछि हामीले उहाँलाई पदमुक्त गरेर सचिव हुकुमबहादुर बस्नेतलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएर परिषद्को तयारी गरेका छौं । परिषद्मा महासचिव ईश्वर पोख्रेल, स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोख्रेल, संगठन बिभाग प्रमुख पृथ्वी सुव्वा गुरुङ, सचिव प्रदिप ज्ञवालीलगायतका नेताहरु आउँदै हुनुहुन्छ ।
तपाई“हरु परिषद् गर्ने अर्को पक्षले गर्न नदिने तयारीमा जुटेको छ । जसले २५ गते कार्यकर्ताको भिडन्त हुने देखियो । यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
हामीलाई परिषद्बाट व्याक गर्न उहाँहरुले डर, त्रास फैलाइरहनुभएको छ । हामी हिंसात्मक गतिविधि गर्ने पक्षमा छैनौं । तर, उहाँहरु विगतका केही दिनदेखि हाम्रा साथीहरुलाई धम्काउने, तर्साउने खालका गतिविधि गर्दै आउनुभएको छ । तपाईँले भनेजस्तै उक्त दिन केही भयो भने त्यसको पहिलो जिम्मेवारी जिल्ला नेतृत्वले लिनुपर्दछ र दोस्रो जिम्मेवारी जिल्लाका गतिविधि निस्तेज पार्न नसक्ने केन्द्रले लिनुपर्दछ ।
विवादको समाधान के हो ? कि यसरी सधैं लडिरहनुहुन्छ ?
पार्टी जीवनमा यस्ता विवाद भई नै रहन्छन् । यसपूर्व पनि हामीले धेरै विवाद मिलाइसकेका छौं । जिल्ला कार्यवाहक अध्यक्षले पार्टीको माइन्यूटमामा टिपेक्स लगाएर पार्टी काममा खटिदै आएका नेताहरुलाई कारबाही गर्नुभएको थियो । त्यो बेला उत्पन्न विवादलाई हामी युवाहरु बसेर मिलाएका थियौं । अहिले पनि पार्टी एक बनाउने धेरै फरमुलाहरु छन् । जसमा पहिलो नम्वर जेठ ६ पहिले फर्केर बैठक बसौं अनि अधिवेशनको मिति तोकेर अगाडि बढौं । जिल्ला संगठन विभागले तयार गरेका पार्टी सदस्यहरुलाई मानेर निर्वाचनमा जाऔं र तेस्रो विकल्प भनेको नवौं महाधिवेशनको बेला तयार भएका सदस्यहरुलाई मानेर १५ दिन १ महिनाभित्रमा अधिवेशनमा जाऔं । यी तिनवटै प्रस्तावमध्ये जुन पनि हामीलाई मान्य हुन्छ ।